Ivive APK एन्ड्रोइडका लागि डाउनलोड गर्नुहोस् [भर्खरको संस्करण] - लुसु गेमर
Ivive APK एन्ड्रोइडका लागि डाउनलोड गर्नुहोस् [भर्खरको संस्करण]
17 सक्छ, 2021 14 सक्छ, 2021 by श्वेता त्रिपाठी
अझै तस्वीरहरु मानव जीवन मा एक क्रान्ति ल्यायो। पछिल्लो समयको सम्झनामा गर्न र रमाईलो गर्न को लागी स्मृति को लागी चिन्ह को लागी ईतिहास बचत। तर Ivive एपीके ले त्यो खेललाई पूरै नयाँ तहमा पुर्‍याउँछ।
तस्विर र छविहरूले बिभिन्न व्यक्तिहरूको लागि फरक अर्थ राख्छ। प्रत्येक व्यक्तिको लागि पनि, उनीहरूले प्रत्येक चोटि हेरिंदा फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दछन्। कहिलेकाँही तीनिहरूले हामीलाई हाम्रो सम्झनाहरू जगाउन मद्दत गर्दछन्, कहिलेकाँही तीनिहरू हाम्रा लागि सूचनाको एकमात्र स्रोत हुन्, ती कथाहरू सुनाउँदछन्, क्षणहरू साझेदारी गर्छन्, र उनीहरूसँग हामीसँग विगतमा पुर्‍याउँछन्।
त्यसो भए, यस युगमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता र संवर्धित वास्तविकताले यी प्राचीन चीजहरू र खजानालाई ब j्गारा छोड्नेलाई रूपान्तरण गर्न दिन्छ। यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, केवल तपाइँको एन्ड्रोइड मोबाइल फोन वा ट्याब्लेटको लागि यस पृष्ठबाट नि: शुल्क Ivive अनुप्रयोग पाउनुहोस्।
Ivive APK के हो?
आइभीभ एक उपकरण हो जुन हामीले हेरिरहेका छविहरूलाई नयाँ रूप र प्रक्षेपण दिन्छ। यो स्वचालित रूप बाट उपलब्धि गराई बढ्दो वास्तविकता रोजगार द्वारा। यसले आश्चर्यजनक एनिमेसनहरू थप्दै छविको अनुभूति र दृश्यहरूमा आश्चर्यजनक नयाँ आयाम सिर्जना गर्दछ।
त्यसोभए किन हाम्रो छविहरूलाई जीवन दिनुहुन्न। जब हामी तिनीहरूलाई हेर्छौं हामीलाई दिमाग बाहिर प्रयोग गर्न सोच्न सक्ने भन्दा बाहिर लैजानुहोस्। जब हामी हाम्रो कल्पनालाई रोजगार दिन्छौं, इमानदार हुनुहोस्, यसको सीमितताहरू छन्। हामी सबै पिकासोस वा भ्यान गग हौं।
भनिएको भइरहेको छ। त्यसोभए के हुन्छ यदि हामी अवतार लेखक वा प्रसिद्ध कलाकारहरूको जस्तो कल्पनात्मक हुन सक्दैनौं। हामी हाम्रो लागि त्यो गर्न टेक्नोलोजी प्रयोग गर्न सक्छौं।
आकार 31.13 एमबी
प्याकेज नाम com.ivive
आवश्यक एन्ड्रोइड 4.3 र माथि
र यदि तपाईं संवर्धित वास्तविकतासँग परिचित हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई थाँहा हुन सक्छ कि यसले विश्वलाई हेर्ने र हेर्ने हाम्रो मार्गमा कत्तिको प्रभावशाली भएको छ।
Ivive अनुप्रयोगसँग ती सबै शक्ति छ जुन रचनात्मकतालाई मानवीय क्षमता भन्दा परेको स्तरमा पुग्नको लागि आवश्यक पर्दछ। यदि तपाइँ निश्चित हुनुहुन्न कि हामी के कुरा गर्दैछौं। तपाईंको एन्ड्रोइड उपकरणमा यो अनुप्रयोग प्रयोग गरेर आफैंलाई जाँच गर्नुहोस्।
एक नयाँ तरीकाले स्थिर फोटोग्राफी र छवि को दुनिया को अनुभव। यसलाई गतिमा र जीवनको नक्कल गर्दै नयाँ, उत्कृष्ट र अप्रत्याशित तरीकामा हेर्नुहोस्।
एकचोटि तपाईंले आफ्नो मनपर्ने तस्विरको साथ आश्चर्यजनक एनिमेसन सिर्जना गरेपछि, यो समय तपाईंको साथीहरूसँग साझा गर्नको लागि हो वा सोशल मीडियामा तपाईंको अनुयायीहरूलाई स्तब्ध पार्ने।
Ivive APK कसरी डाउनलोड गर्ने?
तपाईंको स्मार्टफोनमा यो अद्भुत अनुप्रयोग प्राप्त गर्न तलका चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्।
पहिले तलको डाउनलोड लिंकमा जानुहोस् र एपीके बार डाउनलोड गर्नुहोस् ट्याप गर्नुहोस्
एक पटक डाउनलोड प्रक्रिया पूरा भएपछि उपकरण भण्डारणमा जानुहोस् र फाइल पत्ता लगाउनुहोस्।
स्थापना सुरु गर्न यसमा ट्याप गर्नुहोस्
फोन सेटिंग्स बाट अज्ञात उपकरण विकल्प सक्षम गर्नुहोस्
केही समय थप ट्याप गर्नुहोस् र त्यहाँ तपाईं हुनुहुन्छ।
अब तपाईं ग्याजेट स्क्रिनमा Ivive एपीके पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ र यसलाई खोल्न ट्याप गर्नुहोस्। अब तपाईं छविहरू थप्न सक्नुहुन्छ र जादू हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस् कि यसले सबै छविहरूसँग काम गर्दैन। कार्य छविमा सीमित छ जुन अनुप्रयोगले तपाईंलाई आईकनको स with्केतको साथ बताउनेछ।
तपाइँको लागि केहि समान:
Ivive APK एक उपन्यास तरीकामा छविहरू हेर्नको लागि एक उत्तम तरिका हो। संवर्धित वास्तविकताको सहयोगमा, यसले तपाईंलाई एक आश्चर्यजनक नयाँ अनुभव दिन्छ। पूर्ण अनुहारको साथ यो अद्वितीय अनुप्रयोगको आनन्द लिनको लागि केवल तपाईंको एन्ड्रोइडको लागि डाउनलोड लिंक ट्याप गरेर फाइल प्राप्त गर्नुहोस्।
विभाग Apps, मनोरञ्जन ट्याग Ivive APK, Ivive अनुप्रयोग मेल अन्वेषण
Movidy Apk Android को लागि डाउनलोड गर्नुहोस् [मनोरंजन अनुप्रयोग]
प्राविधिक किंग VM APK एन्ड्रोइडका लागि डाउनलोड गर्नुहोस् [PUBG Virtual]